Ny Semalt Islamabad Expert: Inona no atao hoe "spam referrer" sy ny fomba hisorohana izany?
Raha manara-maso ny fifamoivoizana ao amin'ny tranonkalanao isan'andro ianao ary mihevitra fa nahazo fiofanana izy, dia ny mety ho voka-pifidianana dia ny fitsidihana ny blôginao. Ao amin'ny kaontinao Google Analytics, mety mahita marika maromaro kokoa ianao, izay toa mampiakatra ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao, saingy diso tanteraka izany. Rehefa mamakafaka tanteraka ny loharanom-pifandraisana misy rohy ianao, dia hahita anaran'olon-droa toy ny best-seo-offer.com, Get-Free-Traffic-Now.com, 4webmasters - umzugs transporter.org, best-seo-solution.com , buttons-for-website.com, 7makemoneyonline.com, blackhatworth.com, ilovevitaly.com, priceg.com, resellerclub.com, prodvigator.ua, savetubevideo.com, kambasoft.com, screentoolkit.com, ary superiends.org.
Manam-pahefana ambony iray avy amin'ny Semalt , Sohail Sadiq, no manome antoka fa azo atao ny manaisotra spam amin'ny alalan'ny teknika sasany.
Inona no atao hoe spam referans?
Rehefa vao namolavola ny tranonkalanao ianao ary tsy nanao SEO, dia mety tsy hahita fifamoivoizana ny tranokalanao. Saingy raha raisina ny fifamoivoizana avy amin'ireo loharanom-baovao tsy fantatra, tokony hanombantombanana hoe avy aiza ity fifamoivoizana ity sy ny fomba fifandraisany amin'ny kaonty Google Analytics. Anaram-baovao hafa tokony hotadidinao dia socialseet.ru, o-o-8-o-o.ru, vodkoved.ru, iskalko.ru, myftpupload.com, luxup..ru, websocial.me, slftsdybbg.ru, ykecwqlixx.ru, seoexperimenty.ru, econom.co, darodar.com, edakgfvwql.ru, adviceforum.info. Ny mpampiasa spam rehetra dia ampidirina amin'ny kaonty Google Analytics amin'ny spam, ary ny taham-pifaninanana dia hatramin'ny 100%. Ny zavatra toy ny motera fikarohana , ny rohy amin'ireo tranonkala hafa, ny dokam-barotra sy ny mailaka dia afaka manova anao any amin'ireo tranonkala miahiahy ireo. Amin'ny fomba teknika, mandefa ny HTTP fangatahana amin'ny kaonty Google Analytics izy ary ny fangatahana mitovy amin'izay dia alefa any amin'ny mpizara tranonkala. Tsy maintsy hahita ny adiresy IP amin'ny tranonkalan'ny referrer ianao ary ahitanao izany ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Ny mpandinika iray dia mahasoa ao amin'ny fanadihadian'ny tranonkala statistika ary mamaritra hoe iza amin'ireo tranonkala no mitondra ny ankamaroan'ny fifamoivoizana. Ankoatra izany, mitana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana tetikady ara-barotra mahomby sy matanjaka izy ary manampy anao hiantoka ny filaminan'ny tranonkalanao amin'ny aterineto.
Ahoana ny fomba ampiasan'ny spammers azy?
Ny mpampiasa HTTP dia misokatra mandrakariva amin'ny fanovàna ary azo averina mora foana, izay mampiahiahy azy ireo amin'ny webmasters ary mahasoa ho an'ireo spam. Ireo mpitsikilo sy spammers dia manova matetika ny tranonkalan'ny referrer amin'ny pejy web izay tiany hampiroboroboana. Misy antony roa mahatonga ny safidiny hanao izany.
hampitombo ny fifamoivoizana
Manamboatra scripting automatique izay mamela hitsidika toerana an-jatony an'arivony manana tranonkalan-taratasim-panafody sandoka, matetika dia mihoatra ny folo isan'andro isan'andro ny spam. Ny tranonkala sy ny mpamaham-bolongana dia afaka mahatsikaritra ny fitomboan'ny fifamoivoizana ary ny fahatsapana dia voavaha ao amin'ny kaonty Google Analytics azy ireo amin'ny ankapobeny. Ireo URL sandoka ireo dia matetika ampiasaina amin'ny fifehezana ny kaonty AdSense ary hanitsiana ny rakitra misokatra. Azonao atao ny manisaka azy ireo ao amin'ny kaontinao Google Analytics mba tsy hahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny tranonkalan'ny spam.
Mba hampitombo ny rohy ivelany
Ny sasany amin'ireo blaogy sy tranonkala dia mety hamoaka lahatsoratra maromaro ary mety hampiditra ny rohy mankany amin'ny tranonkalany. Izany dia mamela ireo mpilalao sy hackers hahatonga azy ireo hivadika ho an'ny tranonkalany manokana, izay hanatsara ny laharam-pikarakaran'izy ireo amin'ny farany.
Ahoana ny fomba hanakanana ilay spam referendra?
Raha mitantana tranonkala WordPress ianao, dia afaka manakana ny spam referrer mora ianao amin'ny fametrahana plug-in antsoina hoe Stop Web Crawlers. Ity plugin ity dia azo alaina ao amin'ny tranonkala na azo alaina amin'ny namana. Raha vao tafapetraka, dia hiaro ny tranokalanao WordPress amin'ny spam referrer amin'ny lafiny iray.